Vestibular neuritis (ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » Health A-Z » Vestibular neuritis (ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု )
Vestibular neuritis (ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု ) ကဘာလဲ။
အတွင်းနားတွင် ရှိသော ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော တွင် ရောဂါကူးစက်ခြင်း ကို ခေါ်သည်။ ထိုသို့ရောဂါကူးစက်ခြင်းက ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြောကို အနာဖြစ်စေပြီး သင့်ရဲ့ ကိုယ်နေဟန်ချက်ကို နောက်ယှက်သည်။
Vestibular neuritis (ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Vestibular neuritis (ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ရုတ်တရက်ပြင်းထန်စွာ ခေါင်းမူးဝေခြင်း( ချာချာလည်ခြင်း ၊ ယိုင်ထိုးနေသော ခံစားမှု)
ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြောယောင်ရမ်းခြင်း နှင့် အတွင်း နားစည်ရောင်ရမ်းခြင်းတို့သည် ဆက်စပ်နေသည်။ ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသောအာရုံကြော ယောင်ရမ်းခြင်း တွင် ကိုယ်နေဟန်ချက်နှင့် အကြားအာရုံထိန်းပေးသော အာရုံကြော၏ ကိုယ်နေဟန်ချက်အပိုင်းသာ ထိခိုက်သည်။
အတွင်းနားစည်ရောင်ခြင်းတွင်း ထိုအာရုံကြော ၏လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုလုံးထိခိုက်သောကြောင့် ကိုယ်နေဟန်ချက်ရော အကြားအာရုံပါ ထိခိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် အတွင်းနားစည်ယောင်ရာတွင် ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသောအာရုံကြော တွင် တွေ့ရသော ရောဂါ လက္ခဏာများ အပြင် အပိုထပ်ဆောင်းအနေနှင့် နားအူခြင်း ( နားထဲတွင် တတီတီကြားနေရခြင်း) နှင့်/သို့ အကြားအရုံ ချိူ့ရွင်း ခြင်းတို့တွေ့ရမည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ပြင်းထန်သော လက္ခဏာများဖြစ်သည့် ခေါင်းချာချာလည်မူးခြင်း ခေါင်းတရိပ်ရိပ်မူးခြင်းတို့သည် နှစ်ရက်မျှသာ ကြာမြင့်သော်လည်း ထိုအချိန်တွင် နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ မလုပ်နိုင်လောက်အောင် ဆိုးရွားသည်။ ထိုပြင်းထန်သော ရောဂါလက္ခဏာများ သက်သာလာပြီးနောက် လူနာအများစုသည် ရက်သတ္တပါတ်များစွာ ခန့်မှန်းခြေ ၃ပတ်လောက် အတွင်း မူလလူကောင်းပကတိပြန်ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်းအချို့လူများတွင် ဟန်ချက်မညီခြင်း ခေါင်းရိပ်ရိပ်မူးခြင်းတို့ကို လပေါင်းများစွာခံစားရသည်။
Vestibular neuritis (ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဗိုင်းရပ်ပိုးကူးစက်ခံရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုဗိုင်းရပ်ပိုးသည် လည်ချောင်းနာခြင်း ၊ နှာစေးချောင်းဆိုးခြင်းတိုကနေစတင်နိုင်သည်။
သို့မဟုတ် ဦးနှောက် အမြှေးရောင်ခြင်း သို့သော် အဖြစ်နည်းသည်။ ဦးခေါင်းထိခိုက်မှုကနေပြီး ဘက်တီရီးယားများသည်အတွင်းနား အတွင်းသို့ ၀င်လာနိုင်သည်။
ငါ့ဆီမှာ Vestibular neuritis (ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘ်ာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Vestibular neuritis (ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Gadolinium ထိုးကာ လျှစ်စစ်သံလိုက်ဖြင့် ပုံဖော်ခြင်း
အကြားအာရုံနှင့် သူငယ်အိမ်လှုပ်ရှားမှု စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ဆရာဝန်သည် ခေါင်းချာချာလည်ခြင်းကိုဖြစ်စေသော
လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖြင့်ပုံ့ဖော်ခြင်းဖြင့် အခြားသောအကြောင်းများ ဥပမာ ဦးနှောက် အကျိတ်ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါ လက္ခဏာ မဟုတ် ကြောင်း သေချာရန်ဖြစ်သည်။
Vestibular neuritis (ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရောဂါလက္ခဏာတွေဟာ ဆေးကုသမှုမခံယူရင်တောင် ၇က်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်း သက်သာသွားမှာဖြစ်တယ်။ သို့သော်လည်း ရောဂါဝေဒနာလျှောချဖို့ သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းအချို့ရှိတယ်။
သင်၏ဆရာဝန်အနေနှင့် ပြင်းထန်သောရောဂါဝေဒနာများသက်သာဖို့ အောက်ဖော်ပြပါဆေးတွေက်ိုညွှန်ကြားလိမ့်မယ်။
ဘန်ဇိုဒိုင်ယာဆီဖန်း – စိတ်ငြိမ်ဆေး
ကိုယ်နေဟန်ထိန်းအဖွဲ့ကနေပို့လွှတ်တဲ့ ပုံမှန်ဟုတ်တဲ့ အချက်ပြမှုတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေက်ိုလျှော့ချပေးတယ်။
ပိုးသတ်ဆေး – ဘတ်တီရီးယားကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုယူဆသောအခါပေးသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဆေး၏ဆိုးကျိုးများကို ဆေးနှင့်အတူတွဲပါလာသော အညွှန်းတွင်ဖတ်ကြည့်ပါ။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ကိုယ်နေဟန်ချက်ထိန်းသော အာရုံကြော ရောင်ရမ်းမှု ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ပျို့အန်ချင်တယ်လို့ခံစားရရင် ရေဓာတ်မဆုံးရုံးရအောင် ရေများများသောက်ပါ။ ပမာဏနည်းနည်းကို ခဏခဏသောက်ပေးပါ။
အိပ်ရာထဲတွင်အနားယူပါ။ ရက်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် တွင်ဆိုးရွားသော ရောဂါ
မူးဝေခြင်း ၊ချာချာလည်ခြင်းသက်သာအောင် သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော အရာများရှိသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ဆူညံသော အသံ မဖြစ်အောင်ထားခြင်း
ကားမောင်းခြင်း ၊အမြင့်တွင် အလုပ်လုပ်ခြင်း ၊စက်ပစ္စည်းများနဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။
တွေကိုဖြေးဖြေးခြင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် လမ်းလျှောက်ပါ။ သင့်ကိုသင်ယုံကြည်မှုရှိသည့်အချိန်ထိ
ဥပမာ — ကုန်တိုက် ၊ ဈေး ၊ လူများသောလမ်း
မျက်လုံးကိုခဏခဏလှုပ်ရှားရခြင်းကြောင့် သင့်ကိုခေါင်းမူးလာစေလိမ့်မည်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်နေသည်ထက်စာရင်
သို့သော် အစပိုင်းတွင် မအီမသာ ခံစားရလိမ့်မည်။
Vestibular neuronitis. http://www.nhs.uk/conditions/vestibular-neuronitis/Pages/Introduction.aspx. Accessed October 5, 2017.
Vestibular Neuronitis. http://www.msdmanuals.com/home/ear,-nose,-and-throat-disorders/inner-ear-disorders/vestibular-neuronitis. Accessed October 5, 2017.
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ မတျ 14, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း မတျ 14, 2018
ဘာကြောင့် လည်ချောင်းမကြာခဏ နာနေတာလဲ
မိမိဝှေးစေ့ကို မိမိကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း